Paul Pogba oo ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxdiisa Manchester United… (Imise sano ayuu qalinka ugu duugayaa?) – Gool FM
(Manchester) 16 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay ku dhowdahay inay heshiiska u ballaariso ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Paul Pogba illaa dhammaadka xilli ciyaareedkan 2024-25, taasoo ka dhigan in qandaraas shan sanadood ah uu qalinka ugu duugi doono.
Tan iyo markii uu shaaca ka qaaday sanad ka hor inuu doonayo inuu galo tartan cusub, Pogba ayaa marar badan la la xiriiriyay inuu u wareegayo midkood kooxaha Real Madrid ama Juventus.
Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii uu si buuxda uga soo kabsaday dhaawacii soo gaaray intii lagu guda jiray karaantiilka Coronavirus, xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka ayaa si fiican ula dhacay bandhigga Bruno Fernandes.
Iyadoo Man United ay u muuqato inay labadaan laacib ka leedahay mustaqbal rajo badan, isla markaana ay labada xiddig safka hore ugu jiraan oo ay ku soo bilowdaan garoonka ayaa haddana Wargeyska The Sun waxa uu warinayaa in Pogba uu sameeyay kala wareeg oo uu doonayo inuu waqti dheer sii joogo garoonka Old Trafford.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in xiddiga reer France uu qalinka ku duugi doono heshiis cusub oo shan sanadood ah, qandaraaskaasoo kooxda Manchester United ku sii hayn doona illaa uu ka gaaro da’diisa 32-ka sano.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa la sheegay inay rajeynayaan inay ku dhawaaqaan heshiiskaan dhammaadka xilli ciyaareedka.
"Real Madrid horyaal ayay u gaajoonaysaa, waana inaan guul ku dabbaal-degno Khamiista" – Kabtan Sergio Ramos
Funaanadda ay Kooxda Real Madrid ugu dabbaal-degayso hanashada horyaalka La Liga oo si aan ku talogal ahayn suuqa la soo dhigay... (Imise lacag ah ayaa lagu iibinayay?)